Qoys Wiilkooda oo laga xaday 30-sano kadib si lama filaan ah u helay !! (Daawo Sawirro) | Caroog News
Qoys Wiilkooda oo laga xaday 30-sano kadib si lama filaan ah u helay !! (Daawo Sawirro)
June 10, 2020 - Written by caroog
34 jir isaga oo yar laga iibsaday qoys aan ilmo dhalin oo ku nool 1,000 fogaan u jirta degmadii uu ku dhashay ayaa dib ula midoobaya labadiisa waalid kuwaas oo aan marnaba ka quusan raadintiisa.
Mao Yin wuxuu jiray laba sanno markii qafaashe uu bishii October 17, 1988 si aan la fahmi karin uga xaday waalidkii dhalay. Isaga iyo aabihiis Mao Zhenjing oo wada socda, waxay goob u dhow iskuul caruurta wax loogu dhigo u joogeen damaashaad, markii uu cunugan yari ka codsaday aabihiis inuu biyo usoo iibiyo.
In yar kaddib markii aabuhu kusoo laabtay goobta isaga oo inankiisa biyo u sida, wuu waayay. Taniyo markaas labada waalid waxay bilaabeen inay baadigoob u galaan inankooda iyaga oo waliba boorar ay sawirkiisa ku dhegan yihiin saaray meel walba. Xiriirkoodii joogtada ahaa ee kala dhaxeeyey booliskana, wuxuu noqday mid aan go’in.
Hadda, 32 sanno kaddib, ayuu si aan marnaba la fileyn ula midoobay labadiisa waalid.
In kasta oo ku dhawaad 30-kii sanno oo ay ku raad-joogeen baadigoobkiisa aysa marnaba ka quusan inay mar un helaan, hooyadiis waxay uga hartay shaqo oo dhan si ay meel walba uga raadiso – iyada oo horkacaysa ol’ole ballaaran kuna dhejinaysa boorar ugu yaraan magaalo walba oo Shiinaha kamid ah. Waxay sidoo kale dirtay in ka badan 100,000 oo dhambaallo ah oo ay baahinayso xogta inankeeda.
Waxaa intaas dheer, inay kasoo muuqatay muuq-baahiyaal kala duwan iyada oo farriinteeda gudbinaysa. Goor dambe waxay ku biirtay Urur la yiraahdo Baby Come Back Home” kaas oo ay ku bahoobeen waalidiinta ilmahooda laga xaday ama siyaalo kale ay uga maqan yihiin. Intii ay kamid ahayd ururkaas, waxay ku guuleysatay inay 29 qoys la midayso carruurtoodii ay baadigoobka ugu jireen.
30 sanno kaddib markii ay quus ku dhow yihiin, waxaa u yimid war farxad leh. Farriin ay ku qorneyd in waqtiga ay cunugoodii waayeen lamid ah uu qof helay inan si uu korsado, ayaa booliska u timid.
Dadaal dheer oo lagu bixiyay inay la hubiyo haddii inankaas yahay midkii ka maqnaa labada waaalid, waxaa loo diray dheecaano si loogu xaqiijiyo DNA.
Warka farxadda leh wuxuu leeyahay in inankani uu noqday midkii ka maqnaa labadan waalid.
“Ma doonayo inuu iga tago, mana u oggolaanayo inuu iga dheeraado mar kale,” ayay tiri hooyadan iyada oo gacantiisa ku dhegan.
In kasta oo inankan labadii waalid ee soo korsaday ula baxeen magacyo kale, haddana macadda mustaqalkiisu halka uu ku danbeyn doono.
Qafaalka iyo iibsiga carruurta lagu kala naqeysto suuqa madow, waa dhibaato soo jireen ka ah Shiinaha. Xittaa dowladdu maheyso xogta rasmiga ah ee carruurta maqan. Mareegta Mashruuca Baby Missing waxay qiyaastay inay maqan yihiin 14,893 oo willal ah iyo 7,411 oo gabdho ah.